musha nyika dzakabatana Comedians Nick Cannon Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Nick Cannon Biography inoratidzira Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Chokwadi chemhuri, Vabereki, Hupenyu Hupenyu, Mararamiro, uye Hupenyu Hwega. Zvichitaurwa zviri nyore, ndiko kuongorora kwakazara kweHupenyu Hwake Nyaya kubva paMazuva Ekutanga kusvika paakazova Akakurumbira.
Wati wakambozvibvunza here nezve matarenda maHost eAmerica's Got Talent vane tarenda rakadii? Ipapo ungadai wakatarisa Nick Cannon achiisa pfungwa huru yekutonga seimwe yevagari vekuratidzira. Tarisa uone pfupiso yemufananidzo weNick Cannon Hupenyu uye Rise nyaya pazasi.
Iyo Hupenyu Nyaya yaNick Cannon. Tarisa hupenyu hwake hwepakutanga uye Simuka - Pinterest, Insider.
Isu tese tinoziva kuti Nick Cannon akawana mukurumbira wepasirese kuburikidza neyemazhinji-eruzhinji mutambo wevaraidzo. Nekudaro, vazhinji vevateveri vake havana ruzivo nezve mazuva ekutanga ehupenyu Hwake Hupenyu. Saka, tinokuisa iwe neakajeka-Biology Biography yeAmerican comedian uye TV show presenter.
Nick Cannon Yehucheche Nyaya.
Tarisa uone isingawanzo pikicha yehudiki yeiyo veteran American Comedian - Pinterest.
Kutanga uye pamberi pezvese, iro chairo zita raNick Cannon ndiro Nicholas Scott Cannon. Iye akazvarwa musi wa 8 Gumiguru 1980 kuna mai vake Beth Gardner, aka accountant uye baba vake James Cannon, anokurudzira televangelist muSan Diego, California. Nick ndiye dangwe pavana vaviri vanozvarwa mumubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Sezvineiwo, Nick akarerwa nasekuru nasekuru vake uye anowanzo daidza sekuru vake "baba". Mukomana mudiki akapedzawo mamwe ewemazuva ake ehudiki nababa vake. Ndichiri kugara nababa vake kuNorth Carolina, Nick akadzidza maitiro ekugadzika ake maitiro. Akatovimbisa baba vake nekuva munhu akasimba pesvedzero uyo akaisa maari murume waari nhasi.
Achitaura nezve chiitiko chake cheUdiki, mudiki Nick akatendawo sekuru vake nekumurera zvakanaka. Akataura pamusoro penzira yaaisimbirira pamusoro pekusiyanisa pakati pechakanaka nechakaipa. Naizvozvo, anoona ambuya vake semudzidzisi wekutanga uyo wakamubatsira kuvaka pfungwa yake yetsika kunge mukomana mudiki.
Mhuri yaNick Cannon Kubva:
Ganda dema reiye mudiki weAmerica rinopa humbowo pachena hwenhaka yake yeAfrica. Kunyangwe hazvo pasina chakataurwa pamusoro pewatateguru vake, Nick anonyatsoziva kuti kumwe kunhu wedzinza rake mune chokwadi chekwaMhuri yeAfrica Mhuri.
Nhoroondo Yemhuri yaNick Cannon:
Kuzvarwa mumhuri yemuterevhizheni inoraira kutsvaga-kwese kwesimba nehunhu. Nekuda kweizvozvo, Nick akarambidzwa kuona terevhizheni pamwe nekuteerera radio. Sezvineiwo, iye airambidzwawo kupfeka zvipfeko zvakakurumbira izvo zvaipfekwa nevezera rake.
Kurerwa kwake kwaigona kuve kwakaguma nezviratidzo zvinoverengeka zvekushungurudzika kwakazova giya rebasa rake. Mukutarisana nezvirambidzo zvakawandisa, mudiki weAmerica akasarudza kuzvichengetedza nenzira yake. Nekudaro, akafuridzirwa kunyora rwiyo rwake uye kuzvirekodha pane yake boom bhokisi redhiyo.
Nick Cannon Ekukura Mazuva:
Kukura pamwe nababa vake kuNorth Carolina, Nick aigara achidzidzira dzimwe dzenziyo dzake uye achinyora pasi mutambo. Panguva yaakange ave nemakore masere, akaita mutambo wekusimudza pane yake evhangeri yeterevhizheni yababa vake.
Ehezve, vamwe vanhu vaifara uye vakashamiswa nekuita kwemwana akashinga. Nekudaro, vamwe vanhu vakashoropodza tarenda rake ndokumuudza zvakananga kuti iye aisasekesa uyezve aive asiri muimbi akanaka. Zvinotoshamisa kuti Nick haana kubvumira zvavaitaura uye kushoropodza kuti zvimuremedze. Panzvimbo pezvo akazvikurudzira uye akashanda zvakatonyanya kuyera kuburikidza nemhinganidzo yekushoropodzwa.
Mudiki Nick Cannon akakurira aine chivimbo chakazara uye kuvimba nemano ake- Pinimg.
Nick Cannon's Bio- Dzidzo uye Basa Kuvaka:
Ndichiri kudzidza paMonte Vista High Chikoro muChishanu Valley, Nick haana kutamba mutambo. Nekudaro, akashandisa hunyanzvi-hwekubvarura hunyanzvi kuti awane kirasi yake. Zvinokufadza iwe kuti uzive kuti iyo American celeb yaive yakanyanyisa kugona kubata gabbing kuti akakurumidza kutumidzwa zita rekirasi 'clown.
Tarisa uone asina mhosva mushamarari anotarisa kumashure mumazuva akanaka ekare paakapinda Monte Vista High Chikoro- Viralscape.
Kunyanya kunakidza, Nick Cannon zvishoma nezvishoma akataura nzira yake yekuve mudzidzi ane mukurumbira pachikoro chake. Nekudaro, akazove mutungamiri weAfrican Student Coalition. Panguva ino muhupenyu hwake, avo vaitaridzika kunge vaitarisira pasi tarenda rake vaisakwanisa kuramba huchokwadi hwemhedzisiro yacho sekuonekwa muhupenyu hwemudiki.
VERENGA Dave Chappelle Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Nick Cannon Hwekutanga Basa Roupenyu:
Pashure pazvo, mudiki wenediki akafunga kuwedzera dziva rake ndokutora mafirimu ekuratidzira munzira. Naizvozvo, akatanga kutamba mumakirabhu eungano nguva dzekupera kwevhiki. Pazera ramakore gumi nematanhatu, Nick akange atove nemukana wekutamba munzvimbo dzinozivikanwa sekuti; Inosekesa Fakitori, Iyo Inonakidza Club, uye Iyo Improv.
Neraki, Nick akagumburwa nemaneja akamubatanidza nevamwe vatungamiriri muNickelodeon Kid's TV network. Nekushingirira kusingaperi uye kuzvipira, wechidiki weAmerica munguva pfupi akazova nhevedzano yenguva dzose muchirongwa chevana kutenderedza 1998. Akabatira pamwe TEENick muKonzati, Snick House uye All That Music Festival, uye Zvimwe.
Iye ane tarenda wekuAmerica akaitawo mushoo yemwana, Snick House kumashure mune yakatenderedza 2000- Youtube.
Nick Cannon mugwagwa wekurumbira Biography Nhau:
Unoziva?… Nzira yekutanga yebasa inoputsa mambakwedza ehupenyu hwehunyanzvi hweCannon yaive mimhanzi. Mazuva mashoma makumi matatu nemakumi matatu nemashanu mushure mekupedza chikoro chesekondari muna365, Cannon akagadzira boka rap rakadanwa Da G4 Dope Bomb Bhodhi. Neshamwari yake Steve Groves, boka rakatanga kunyora nekudzidzira nziyo dze rap. Neraki, iye mudiki weAmerica akarova jackpot nekusaina chibvumirano neJive Record muna2001.
Mukati menguva imwechete yekutanga mukana wakakura mumimhanzi, Nick akawanawo mukana wekutora chikamu mune yeti hit movie Varume mu Black II muna 2002. Mukana usingawanzoitika wekukanda mufirimu wakagoneswa naNick wekuteedzera Will Smith.
Ona kuti akataridzika sei mudiki paakawana chinzvimbo muvhiyo Varume muvatema II- IMDB.
Munguva yakafanira, Nick akadavidza kudanwa uye mukurumbira paakawana basa guru mufirimu ra2002 Drumline. Anenge mwedzi gumi nemaviri mushure maizvozvo, akaburitsa yake yakatanga zita iro zita rake rezita uye akakanda kune rakakosha basa mu12 bhaisikopo Rudo Harubhadhare Chinhu.
Kuonekwa kwake mune drumline kwakamutenderedza muchiedza chemukurumbira- Wblk.
Nick Cannon's Biography- Kukwira Mukurumbira Nhau:
Panguva ino muhupenyu hwake, munhu haagoni kuramba chokwadi chekuti Nick akashanda asinganetsi kuti akachiita kure muhupenyu. Kutanga semukomana mudhorobha-mudiki uye uchishanda uchikwira manera emukurumbira chiito chakakodzera kutevedzera.
Munguva ya2005, Nick Cannon akanyora imwe kubudirira kukuru nekugadzira yake rekodhi rezita raakatumidza Can-I-Bhora Zvinyorwa. Nechirevo chake, akaburitsa yake yechipiri mimhanzi albha yakanzi; Akanzi Matanho. Nick akashandawo semubati weAmerica's Got Talent kubva muna 2009 kusvika 2016.
Kudzoka mumazuva, mutambi wemuAmerican akazoita mukurumbira sekushandira pamwe seAmerican Got Talent- Hollywood.
Nekukurumidza mberi kusvika kunguva yekuburitsa Hupenyu Hwake, Nick anowanzo rukudzwa semufananidzo we Will Smith pamazuva ake ouduku. Chokwadi ndechekuti, Smith akaitawo mupiro wakanaka kunyaya yekubudirira kwaNick. Nekudaro, Nick ave achiwanzoita nhanho dzekurekodha zvimwe zvinobudirira muhupenyu hwake hwebasa. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ukama hwaNick Cannon Hupenyu Hupenyu chokwadi:
MuAmerican comedian anoita kunge akabatanidzwa nevakadzi vasiri pasi pegumi nemaviri muUkama hwake Hupenyu. Kuti nditaure zvishoma, Nick anga aine rudo rwekudanana naNicole Scherzinger, Kim Kardashian West, Amber Rose, naSelita Ebanks.
Mukadzi anonyanya kuzivikanwa pakati pevadikani vake aive Selita Ebanks. Nick akadana Selita kwemwedzi mitatu mushure mekunge amuita mukadzi. Nehurombo, mushure memwedzi mishanu yekubatanidzwa, idzo-rudo-shiri dzakapera kupatsanura mumwedzi waGumiguru 2007.
Akambove akapenga murudo naSelita Ebanks zvekuti akamubata. Unoona here kuti vanotaridzika zvakanaka sei pamwechete? - Zimbio.
Nick Cannon Vadzimai:
Kure neruzivo rwake rwekufambidzana uye hwehukama flings, Nick akafunga kugara pasi nekuvaka imba yakanaka kwazvo. Naizvozvo, akasunga banga Mariah Carey nomusi wa30 Kubvumbi 2008. Mushure memakore masere ekuroora, muAmerica wekudyidzana nemukadzi wake vakasainira chikumbiro chekurambana ndokuenda nenzira dzakasiyana.
Sangana neaimbova mudzimai waNick Cannon, Mariah Carey- Jakartapost.
Nick Cannon Vana:
Chinhu chinoshamisa chose chakave chakaitwa naNick muhukama hwake Hupenyu hwese ndiko kuberekwa kwevana vake vaviri nemurume wake wekare, Mariah Carey. Makore matatu vari muwanano yavo, Nick nemukadzi wake vekare vakagamuchira kuberekwa kwemapatya avo ehukama. Mwanasikana wake akatumidzwa kuti Monroe apo mwanakomana wake akatumidzwa kuti Moroccan Scott.
Unoziva here?… Mushure mekuparadzana kwake naMariah Carey, Nick akapindirana mune imwe nyaya yekudanana naBrittany Bell. Hukama hwavo hwakatungamira mukuzvarwa kwemwana waNick wechitatu, Goridhe. Zvinotoshamisa ndezvokuti amai vaNick amai vakazivisa kuti vari kutarisira mumwe mwana kumushamarari weAmerica mumwedzi waJune 2020. Zvisinei, chokwadi chezvaanotaura hachisati chasimbiswa naNick Cannon.
VERENGA Steve Harvey Mwana WeChidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Iye anopembererwa American TV muridzi anogovera mufananidzo wevana vake vatatu- Amomama.
Hupenyu Hwemhuri hwaNick Cannon Chokwadi:
Kuona kuti kurera kwake kwakabatsira zvakanyanya mukuita kwake basa, saka zvakakosha kutaura pamusoro paNick Cannons Hupenyu Hwemhuri. Nekudaro, pazasi pane ruzivo rwakadzama renhengo yega yega yeNick Cannon's Household.
Nezve Baba vaNick Cannon:
Basa rababa vaNick Cannon harigone kunyanyosimbiswa muhupenyu hwake. Kutanga uye pamberi pezvese, baba vaNick, James Cannon, vakamudzidzisa mararamiro nemitemo. Kechipiri, rapper weAmerica akawana mukana wake wekutanga kune vezvenhau kuburikidza nababa vake vakamupa mukana wekuita pazvirongwa zvake zveTV.
Anogara achidada kuratidza baba vake, James Cannon- Xxlmag.
James Cannon aive muterevhizheni anoshumirawo vanhu paterevhizheni. Mashoko ake asingachinjiki ekurudziro akaita kuti Nick akure pamwe nekusimbiswa kwakasimbiswa mune yake Hupenyu Nyaya.
Nezve Amai vaNick Cannon:
Unoziva?… Amai vaNick Cannon, Beth Gardner vakamubata pamuviri aine makore gumi nemanomwe. Panguva iyoyo, aive asati aroorwa uye achiri kuchikoro chesekondari. Nekudaro, vanhu vazhinji vakaramba vachimukurudzira kuti afunge nezvevadzidzi vake uye kubvisa nhumbu. Nekudaro, akafumura kuti chimwe chinhu kubva mukati chakaramba chichimukurudzira kuti ave nemwana. Saka Nick Cannon akazvarwa.
Tarisa zvakanaka amai vaNick Cannon, Beth Gardner- DennyBurk.
Amai vaNick vakashinga vakaramba vachienderera mberi nekupedzisa dzidzo yavo mushure mekuzvarwa kwake. Hazvishamise, muimbi wekuAmerica akapedza humwe hwouhwana hwake achigara nasekuru nasekuru vake. Neraki, Beth Gardner akazopedzisa kudzidza kwake uye akave akazara akazara accountant. Iyo feat iyo yakafuridzira Nick kuve nemweya wekusamboregedza.
Nezve Vanin'ina vaNick Cannon:
Kurarama hupenyu hwakagwinya, Nick ane hama imwechete yekuzvarwa uye hapana hanzvadzi dzaaigona kugovana naye kubudirira kwake. Muna 2011, munin'ina waNick, Gabriel Cannon akange amhanya-mhanya nemapurisa eLos Angeles vachipomerwa kuyedza kuba chidimbu chemidziyo yevhidhiyo.
Neraki, akazoburitswa mutirongo. Mwedzi mishoma aburitswa, akauya kubasa kuti ashande seMutungamiri weKushambadzira uye Endorsements, neVeteran Bhizinesi Varidzi uye Vabati vekutumira. Parizvino ari kushanda nesimba kuti agadzirise zvikanganiso zvake zvekare.
Sangana nemunin'ina akafanana naNick Cannon, Gabriel Cannon- Myspace.
Zvakare, iyo yakafukidzwa macelebs eAmerica yakagadzira shamwari dzakakosha dzinofanirwa kunzi hama dzake. Mumwe weanoshanda naye akanyanya kushandurwa shamwari yake muvhimi weAmerica mutengesi, Kevin Hart.
Nezve Hama dzaNick Cannon:
Vanasekuru vababa vaNick Cannon vanonzi James E. Cannon naMarie A. Scott. Ipo sekuru vake amai vaamai ndiMelvin Hackett. Nehurombo, iro chete rinozivikanwa ruzivo nezve gogo yaamai vaNick izita rake - Yakareba. Uyezve, hapana ruzivo rwakawanda rwunozivikanwa nezve babamunini vaNick nasekuru pamwe nababamunini vake nababamunini.
Nick Cannon Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Kutora comedy kubva pamazuva ake ekutanga, Nick agara akaronga nzira dzekuti vanhu vaseke uye vanzwe kurerukirwa nekushushikana. Nekureva, hunhu hwake uye hunhu hwake hwakave hwakapesvedzera zvikuru nezvaanoita. Izvo zvingave zvakaoma zvakanyanya kutora imwe nguva neAmerican comedian uye uchiri kunzwa pfungwa shoma yekugara wega.
Kukwanisa kufadza vamwe hazvitadzise Nick kuzvivaraidza iye. Nekudaro, ane 8 Jack Russell Terriers uye anoda kitsi zvakare. Paanotaura nezvake, Nick anofumura kuti mhuka yake yemweya ishumba.
Wedu veteran multifaceted ane mukurumbira mune tennis uye South Indian chikafu. Akambofumura kuti kunze kwenyika yevaraidzo iro chete basa raangadai akafungidzira muAstronaut.
Nick Cannon's Lifestyle Chokwadi:
Kune murume ane calamm yake, Nick anogara ane fashoni Mararamiro sezvakangoita muAmerican Comedian Steve Harvey. Sezvineiwo, murwi muimbi akaunganidza mari yakawanda mumabasa ake ebasa. Panguva yekunyora, Nick Cannon's Net Kukosha inofungidzirwa kunge iri mari inokwana yemamiriyoni makumi matanhatu emadhora.
Imba yaNick Cannon:
Pakutanga muhupenyu hwake hwebasa, Nick Cannon akatenga chivakwa chine nhurikidzwa mbiri chakagara nzvimbo yenzvimbo ye 2,173 sq.ft. Imba yakanaka kwazvo yemakamuri mashanu yekurara yakanga yamutengera madhora zviuru makumi mana nemashanu. Nekudaro, Nick anonzi akatengesa imba iyi nemari inofungidzirwa kusvika pamakumi matanhatu nemakumi matanhatu nemakumi matatu emadhora muna 421,000.
Panguva yekunyora iyi Bio, Nick akawana imba yakanaka mumaruwa eNew Jersey. Kunyangwe hazvo asina kutenga imba iyi, pari zvino ari kuiroja pamari inofungidzirwa kuva $ 11,000. Zvinotonyanya kufadza, chibvumirano chepfuma chine chirevo che "rent to own" chakabatanidzwa machiri. Nekudaro, Nick anochengetera yakasarudzika kodzero yekutenga madhora emamirioni matatu nekuda kwake.
VERENGA Ellen DeGeneres Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutarisa pane imba yakasarudzika inogarwa nemhuri yevavaridzi vekuvaraidza- DailyMail.
Motokari yaNick Cannon:
Izvi hazvipikiswi kuti muAmerican celeb ane akawanda anodhura brand yemota muunganidzwa wake wemotokari. Mota dzinozivikanwa kwazvo muunganidzwa wake ndeaya; a Maserati Quattroporte, Range Rover, Mercedes-Benz G-Wagon, uye Ferrari California.
Nick anoratidzira yake yakasarudzika Ferrari 430 - Wenhau Nhau.
Nick Cannon's Untold Chokwadi:
Kutenderera Biology yeAmerican multifaceted celeb, hezvino zvinhu zvishanu pamusoro paNick Cannon izvo zvaizogona kukubatsira iwe kuti uzive zvizere ruzivo rweYake Life Life.
Chokwadi # 1: Nick Cannon's Hutano Kupokana:
Waizviziva here?… 2012 raive gore rinotyisa kune muimbi ane mukurumbira wekuAmerica uye murapi. Nehurombo, Nick akaiswa muchipatara nekuda kwekutadza kutsvo kweitsvo iyo yakakonzerwa ne lupus nephritis. Nokurapwa kwakaringana kuchipatara, comedian akapora kubva pakurwara ndokuenderera mberi nekuyedza kwake kuedza.
Chokwadi # 2: Kushanda kwaNick Cannon:
Kufanana nevamwe vakawanda vakakurumbira, Nick Cannon mumwewo murwi. Pane imwe nguva muna 2011, akaenda kune vezvenhau kukurudzira vechidiki kuti vakurudzire zviroto zvezvavanosarudza. Kubva ipapo, matarenda mazhinji vechidiki vakabuda muUnited States, nekuda kwemashoko ake ekurudzira.
Chokwadi # 3: Cannon Inopokana Feud naEminem:
Kudzoka mumazuva apo Nick uye Mariah Carrey vaive vachiri pamwechete muhukama hwavo, Eminem akaseka mukadzi waNick munzira yake yakanzi 'Bagpipes kubva kuBaghdad'. Pasina kufunga kwechipiri, Nick akapindura Eminem pane yake account ye twitter. Kupokana kwavo kwakaenderera mune zvimwe zvikamu zvakawanda kusvika kurambana kusingadzivisike kwaNick nemukadzi wake mu2016.
Chokwadi # 4: Chitendero chaNick Cannon:
Nekufamba kwenguva, vateveri vazhinji vanoda kuziva vakawanzo bvunza nezve zvitendero zvaNick Cannon. Kunyangwe muchiedza chekusanzwisisana kwakamuka pakati paNick nevanhu vechiJuda, vazhinji vakatsvaga mhinduro dzine chekuita nemaonero ake echitendero.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Nick muKristu. Akarererwa zvinoenderana nekutenda kwechiKristu. Nekudaro, akambotaura pamusoro pevaJudha icho chinonzi chinhu chekusarura. Nhau dzakanaka ndedzekuti, Nick, akakumbira ruregerero nezvaakaita sezvo asina kureva kuti asvibise mufananidzo wechiJudha.
Chokwadi # 5: Trivia:
Achigara munyika umo vechidiki vazhinji vanokanganiswa nemabatiro enharaunda yavo, Nick akapedza mazuva mazhinji ehudiki hwake munharaunda ine mukurumbira ine gang. Nekudaro, akava nechokwadi chekudzivisa mapoka, uye aishandisa nguva yake yekuzorora kutamba basketball. Nekuda kwekutarisa kwake kwakazara nezvehupenyu hwekugutsikana kwake, Nick ikozvino yakanyora budiriro kupfuura kufunga kwake.
Wiki yaNick Cannon:
Pazasi ndiyo wiki zivobase yaNick Cannon. Itafura ichakubatsira iwe kuti uwane ruzivo nezvake zvine musoro uye zvinobudirira. Tsvaga pazasi
Zita rizere: Nicholas Scott Cannon
Nick Zita: Nick
Date off Kuzvarwa: 8th October 1980
Nzvimbo yekuzvarirwa: San Diego, California
Baba: James Cannon
Amai: Bheti Gardner
Vanun'una: Gabriel Cannon
Mumwe: Mariah Carey (ex-mudzimai)
Vana: Monroe, Moroccan Scott, uye Goridhe
Net Worth: $ Miriyoni 60
Muhoro: Mamirioni gumi (pagore)
kukwirira: 1.83m - in metres
6'0 "- mutsoka
Pasina mubvunzo, taona kuti Nick Cannon akatora sei pivot yekutenda kwake kuti aite kubudirira kukuru munyika ine gakava. Yake Hupenyu Hupenyu yakaratidza kupfuura kusahadzika kunonzwisisika kuti hapana chakanaka chinouya nyore. Uye kunyangwe mukurwa kwehupenyu, paizogara paine vanhu vanokuodza moyo pamwe neavo vanokukurudzira nekukukurudzira.
Tinokutendai nekuverenga yedu Nhoroondo yaNick Cannon Yehupenyu uye Untold Biography Chokwadi. Tinovimba wakadzidza zvakawanda kubva kuchinyorwa chedu. Kunyanya zvakadaro, inzwa wakasununguka kugovana zvaunofunga pamusoro pebasa rakawandisa raNick mubhokisi remashoko pazasi. Zvakare, usakanganwa ku taura nesu kana iwe ukawana chero chinhu chisina kunaka muNick Cannon's Bio.
Kevin Hart Utano Nhau Plus Untold Biography Facts